Les Trois Cheminees Chambres d'Hotes, Livarot
Igumbi elise- indawo yokuhlala nenesidlo sakusasa sinombuki zindwendwe onguPaul
Olu luhlu lolwegumbi lokulala VICTORIA
Sinamagumbi amane akhoyo
Ifakwe kwisitrato esikhulu kumbindi weLivarot, iLes Trois Cheminees ibonelela ngokufikelela kwi-WiFi yasimahla kuyo yonke indawo kunye ngendawo yokuhlala yeB&B yesintu enegumbi lokuphumla ekwabelwana ngalo. Igumbi ngalinye linegumbi lokuhlambela labucala elifakwe ibhafu okanye ishawa. Ukuthuthuzela, uya kufumana izinto zangasese zasimahla kunye nesomisi seenwele. Amanye amagumbi anendawo yokuhlala ukuze kube lula kuwe. Uya kufumana indawo yokugcina imithwalo kwipropati.
Yakhelwe malunga ne-1600 le ndawo intle yesakhelo se-oki ine-ambiance efudumeleyo enobuhlobo kwaye ifakwe ngesitayile ngokuhambelana nobudala bayo. Amagumbi okulala ahlukile kwaye ayahluka ngobukhulu, ukusuka kumakhulu kwaye mahle ukuya kumancinci kancinci kodwa athambile.
Kubalulekile ukuqwalasela ukuba le yindlu endala kakhulu, ethe ngothando nangovelwano yabuyiselwa kwimigangatho ephezulu kakhulu ukuhlangabezana neemfuno zabahambi banamhlanje.
I-Les Trois Cheminees sesinye sezona zakhiwo zindala eLivarot ezineendawo ezintathu zomlilo ezinkulu zamatye, kungoko igama laso. Olu luhlu lwenzelwe igumbi lokulala iVictoria kuphela. Bona ezinye izintlu ku-Airbnb zamanye amagumbi amathathu.
Igumbi lokulala iVictoria: Ligumbi elikhulu nelikhoyo elijongeka ngakumbi elinegumbi lokuhlambela, kwaye lilungele ibhedi yomntwana owongezelelweyo.
Igumbi lokulala 'iHolloways': Ligumbi elihle elikhulu elinendawo yomlilo enkulu, kunye namaplanga atyhidiweyo kulo lonke.
Igumbi lokulala iFargeon: Igumbi elincinci phezulu kwendlu, ligcwele umlinganiswa kunye negumbi lokuhlambela elilungileyo.
Igumbi lokulala iBellarmine: Eli gumbi linebhafu. Akukho nalinye igumbi eliye latshintshwa ngokwalo omabini linengcango yalo yokuqala kodwa lumka, linezakhelo zocango eziphantsi (1.56m), kwaye igumbi lokuhlambela linosilingi ephantsi (1.75m). Lumka ke ukuba ungabantu abade!Igumbi lokulala iBellamine inezinyuko ezintle ezigobileyo ezikhokelela kuyo.
Our guests have access to the communal area, bedroom and the dining room.
Sinamagumbi amane akhoyo ukuze iindwendwe ziqaphele ukuba ezinye iindwendwe zinokubakho.
Ifakwe kwisitrato esikhulu kumbindi weLivarot, iLes Trois Cheminees ibonelela ngokufikelela kwi-WiFi yasimahla kuyo yonke indawo kunye ngendawo yokuhlala yeB&B yesintu enegumbi lokuphumla ekwabelwana ngalo. Igumbi ngalinye linegumbi lokuhlambela labucala elifakwe ibhafu okanye ishawa. Ukuthuthuzela, uya kufumana izinto zangasese zasimahla kunye…
31 Rue Mal Foch, 14140 Livarot, France
Ifakwe kwilali entle eqengqelekayo, iLivarot yilali encinci esembindini wengingqi yePays d'Auge eNormandy. Amahashe, iinkomo, amasimi ee-apile, itshizi kunye nebranti edumileyo yecalvados zinokufunyanwa ngobuninzi.
ILivarot ibekwe kakuhle, isetyenziswa ziindlela ezimbini ezinkulu, iRD579 indlela eya eLisieux kunye neRD4, indlela eya eCaen. Ikwayimizuzu nje eli-15 ukusuka kwidolophu enkulu yaseLisieux eqhayisa ngeBasilica yayo emangalisayo.
Le dolophu inemveliso yetshizi edumileyo yosapho lwaseGraindorge evelisa iitshizi ezine zezona zidumileyo, ezizezi, iLivarot, iCamembert de Normandie, iPont L'Eveque kunye neNeufchatel.
Iilwandle zeMfazwe zifikeleleka ngokulula kunxweme olukhulu lwaseNormandy kwaye idolophu eyikomkhulu yaseCaen enenqaba yayo yaseNorman ingaphantsi kweyure yokuhamba. Idolophu yaseFalaise enenqaba yayo entle yaseNorman eyakhiwe nguWilliam uMnqobi (uGuillaume le Conquerant) ikumgama nje wemizuzu engama-30. IiChateau ezininzi zikufutshane ngokufanelekileyo ukutyelelwa, ngakumbi iChateau Vendeuvre kunye neChateau Saint-Germain-de-Livet.
ILivarot idityaniswe nedolophu yaseNgesi yaseMolton, eDevon.
Ukulandela iDabi laseNormandy, idolophu yakhululwa nge-19 ka-Agasti 1944.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Livarot